Freon - Intsebenziswano yokusebenzisana Phakathi kweenkampani ezintathu
Freon - Imbali yeFranon
Iinkampani zifunwa ngeNkqubo encomekayo yokuHlaba
Amafriji avela ngasekupheleni kwe-1800 ukuya kowe-1929 basebenzisa inkunkuma enetyhefu, i-ammonia (NH3), i-methyl chloride (CH3Cl), kunye ne-sulfur dioxide (SO2), njengeziqhumiso. Izingozi eziliqela zengozi zenzeke ngowe-1920 ngenxa ye-methyl chloride ukuvuza okuvela kwiifriji . Abantu baqala ukushiya amafriji kwiindawo zabo zangasemva. Umzamo wokusebenzisana waqala phakathi kweenkampani ezintathu zaseMerika, iFrigidaire, iGeneral Motors kunye neDuPont ukukhangela indlela engafanelekanga yefriji.
Ngowe-1928, uTomas Midgley, uJr. axhaswa nguCharles Franklin Kettering waqulunqa "ummangaliso" obizwa ngeFranon. I-Freon imela i-chlorofluorocarbons eyahlukeneyo, okanye i-CFCs, esetyenziswa kwizorhwebo nakucandelo. I-CFCs liqela lama-aliphatic organic compounds aqukethe izinto zekhabhoni kunye ne-fluorine, kwaye, kwiimeko ezininzi, ezinye i-halogen (ngokukodwa i-chlorine) kunye ne-hydrogen. Ii-Freons zi-colorless, ezingenasiphelo, ezingenakutsha, ezingabonakaliyo, ezingabonakaliyo kunye neenkunkuma.
UCharles Franklin Kettering
UCharles Franklin Kettering wavelisa inkqubo yokuqala yokushisa imoto kagesi. Wayengumongameli we-General Motors Research Corporation ukususela ngo-1920 ukuya ku-1948. I-General Motors yesazinzulu, uThomas Midgley waqulunqa i- petrolethi e- ethyl.
UThomas Midgley ukhethwe nguKettering ukuba aphethe uphando kwiifriji ezintsha. Ngowe-1928, uMidigley noKettering baqulunqa "ummangaliso" obizwa ngeFranon. UFrigidaire wathola ilungelo lobunikazi bokuqala, US # 1,886,339, ngenkqubo yeCFC ngoDisemba 31, 1928.
Ngo-1930, i-General Motors kunye neDuPont benza i-Kinetic Chemical Company ukuvelisa i-Freon. Ngowe-1935, iFrigidaire kunye nabathengiselwano bayo bathengise iifriji ezizi-8 eziza ku-United States zisebenzisa i-Freon eyenziwa yi-Kinetic Chemical Company. Ngomnyaka we-1932, iCandelo loNxibelelwano lweCandelo loBunjineli lasebenzisa uFranon kwiyunithi yokuqala ye-air-conditioning home, ebizwa ngokuba yiKhabinethi ye-Atmospheric .
Igama loRhwebi loRhwebo
Igama lezorhwebo elithi Freon ® liphawu lokuthengisa elibhalisiweyo le-EI du Pont de Nemours & Inkampani (DuPont).
Ngenxa yokuba iFranon ayinayo inetyhefu, yaqeda ingozi ebangelwa ukuvuza kwefriji. Kwiminyaka embalwa nje, i-compressor frijiji esebenzisa iFranon yayiza kuba ngumgangatho weenxa zonke iikhikhini zasekhaya. Ngowe-1930, uTomas Midgley wabamba umboniso wezinto eziphathekayo ze-Freon ze-American Chemical Society ngokubhenela i-pulm-full of gas emangalisayo kunye nokuphefumula kwi-flame lamakhandlela, elicinywayo, ngaloo ndlela ibonisa ukungcola kwegesi nezakhiwo ezingenakutsha. Kwiminyaka emininzi emva koko abantu baqonda ukuba i-chlorofluorocarbons enobungozi be-ozone yomhlaba wonke.
I-CFCs, okanye i-Freon, ngoku iyanconywa ngenxa yokwandisa kakhulu kwinqwelo ye-ozone yehlabathi. I-petroli ekhokelayo nayo yinto engcolileyo, kwaye uTomas Midgley waxhamla ngasese ngenxa yetyhefu ekhokelayo ngenxa yokuveliswa kwakhe, into ayigcinayo ebantwini.
Ukusetyenziswa kakhulu kweCFCs ngoku kuvalwe okanye kuvinjelwe kakhulu yiProtocol yaseMontreal, ngenxa yokuchithwa kwe-ozone. Iimveliso zeFranon eziqukethe i-hydrofluorocarbons (HFCs) endaweni yoko zithathe indawo ezininzi, kodwa nazo ziphantsi kolawulo oluqinileyo phantsi kweprotocol yaseKyoto, njengoko zibonwa "ziphumo ezininzi zokushisa."
Azisasetyenziselwa kuma-aerosols, kodwa ukuza kubekho namhlanje, akukho nto ifanelekileyo, ukusetyenziswa kweendlela eziqhelekileyo kwiiharocarboni sele zifunyenwe ngesiqhumiso esingenakutsha okanye sisetyhi, iingxaki ze-Freon zasekuqaleni zacetywa ukuba ziphephe.
Invention kunye neMbali yokuCoca i-Vacuum Cleaners
I-Evolution yoLwazi lweMidiya
Ngubani owafaka i-Kettlebell?
Ngubani owafaka iiCredit credit?
Fumana indlela abaphikisi be-NFL abaye bazimisela ngayo kule ndawo
I-Phenomenon engqinelanayo: iChizi yamaNazi e-Asia
Inyathelo-ngeNyathelo: UkuSisiseko okuSiseko
Iingqungquthela, uGenus Bombus
Injongo ivakalisa iVamily Used often Redundantly
Ukholo Luyintloko - Hebhere 11: 6 - Usuku 114
Isibonelo sokuguqula iiNyunithi Ingxaki - Ukuguqulelwa kweMetric kuya kuguqulelo lwesiNgesi
Maine Caldecott Abanqobile nguRobert McCloskey
Uqwalasele ngokugqithiseleyo u-Alice Munro's 'Runaway'
Ukugcina Imoto Yakho Yesixhobo
Isikolo seGelug saseBibetan Buddhism
Ngubani uDkt Gary Kleck?
I-Mystery ye-Wolves yaseNyakatho Melika yaseMelika
Malunga namaBuddhist Nuns
I-cheerleading Cheers, i-Chants kunye ne-Yells-Iqoqo leeNkokeli ze-Cheerleaders
I-Huaca del Sol (Peru)
Inkcazelo yeNyukliya kunye nemizekelo
Yazi iSitatimende esisisiseko seWerkingkiing
Isifundo Sokubambisana Sifundo Sample